बढ्दो सेयर बजारमा लगानीकर्ताले गर्ने गल्ती | NewsKarobar
गृहपृष्ठ बढ्दो सेयर बजारमा लगानीकर्ताले गर्ने गल्ती
सेयर बजारमा आएको लगातारको वृद्धिले सेयर बजारको वियरिस प्रवृत्ति सकिएर बुल बजारको सुरुवात भएको हो कि भन्ने संकेत गरेको छ । सेयर बजारको लामो समयको गिरावटका कारण लगानीकर्तामा देखिएको निराशा अब विस्तारै आशामा परिणत भएको पनि देख्न सकिन्छ ।
हुन त वियरिस बजारले बुल बजारको ढोका खुला गर्छ भनेर जोन टेम्टेसनले भनेझैं लगानीकर्तामा चरम निराशा भएको अवस्थामा नै बुल मार्केटको जन्म हुने गर्छ । अर्कोतर्फ वारेन वफेटले भनेका छन्- बजार घट्यो भनेर चिन्तित हुनेभन्दा पनि सस्तोमा किन्ने अवसर आयो भनेर खुसी हुने हो ।
बढ्दो बजार पैसा, सम्पत्ति बनाउने आधार हो । यसलाई सही तरिकाले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन । तर, बढ्दो बजारमा सस्तोमा र थोरै पैसामा धेरै सेयर किन्ने अवसर भने गुम्दै जान्छ । यो चाहिँ यसको खराब पक्ष हो ।
बढ्दो बजारमा लगानीकर्ताले गर्ने सबैभन्दा ठूलो गल्ती बजारमा हुने सानातिना उतारचढावलाई हेरेर छोटो समयमा नाफा लिनका लागि किनबेच गरिरहन खोज्नु हो । तपाईं पनि त्यसो गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने नगर्दा नै बेस हुनसक्छ । यो गर्न खोज्नु भनेको रोकिए जस्तो गरेको बसमा पिसाब फेर्न निस्केर बस छुटे जस्तै हो ।
तपाईं छुटिसक्नुहुन्छ, बस अगाडि गइसकेको हुन्छ । बढ्दो बजारमा कारोबार गर्न खोज्दा ब्रोकर कमिसन बढ्ने र होल्ड गर्नेको भन्दा नाफा पनि कम हुने हुन्छ । उदाहरणका लागि तपाईंले कुनै कम्पनीको सेयर ४०० रुपैयाँका दरले किन्नुभयो । सेयरको मूल्य प्रतिसेयर ३० रुपैयाँ बढ्यो । ३० रुपैयाँ नाफा देखेर ४३० का दरले सेयर बेच्नुभयो । अर्को साथीले पनि ४०० मा नै सेयर किन्यो । तपाईं घट्ने आशमा बस्नुभयो तर घटेन, मूल्य ४५० पुग्यो ।
अब तपाईं चुप लागेर बस्न सक्नुहुन्न । ४५० रुपैयाँमा पुनः सेयर किन्नुहुन्छ । यो मूल्यमा यसअघि किनेको भन्दा कम सेयर किन्न सकिन्छ । यसबीचमा तपाईंले ब्रोकरलाई तीनपटक कमिसन तिर्नुभयो । तपाईंले कमाएको भन्दा बढी ब्रोकरले कमाइसकेको हुन्छ ।
४३० र ४५० बीचको २० रुपैयाँ पनि तपाईंले गुमाउनुभयो । तर, ४०० रुपैयाँका दरले किनेर होल्ड गर्ने तपाईंको साथीले किन्दा एकपटक मात्र कमिसन तिरेको छ भने उसको नाफा प्रतिसेयर ५० रुपैयाँ देखिन्छ ।
यसैले बढ्दो बजारमा छिटो-छिटो किनबेच गर्नुभन्दा चुप लागेर श्रीमान-श्रीमतीको झगडा हुँदा मुखमा पानि हालेर बस्नु भने जस्तो लोभी मन, अनलाइन कारोबार गर्ने चन्चले हात र ब्रोकरलाई बिक्री आदेश दिन छुच्चो मुख सबै निष्क्रिय पारेर बस्दै फाइदा हुन्छ । बजार बढ्न भर्खर सुरु भएको छ । बुलको समय इतिहासले करिब ५ वर्ष तय गरेको छ ।
‘लाटो लड्छ एक बल्ड्याङ, बाठो लड्छ तीन बल्ड्याङ’ भन्ने उखान हामीले धेरै सुनेका छौं । यो उखान के उद्देश्यका लागि, कहिले र कसले बनायो थाहा छैन ? तर सेयर बजारमा यो त्यत्तिकै उपयोगी भएको देखिन्छ । सेयर बजारमा बढी बाठो हुन खोजे वा हरेक तल-माथिमा पैसा बटुल्ने प्रयास गर्यौं भने हामी तीन बल्ड्याङ खान सक्छौं ।
जर्मनीमा लगानीकर्ताबीच एउटा अनुसन्धान गरियो । अनुसन्धानका क्रममा लगानीकर्तालाई उनीहरुले सेयर बजारबाट लिएको नाफा (प्रतिफल)का बारेमा प्रश्न सोधिएका थियो । यो प्रश्नपछि उनीहरुले सेयर कारोबार गरेको ब्रोकरबाट विवरण (स्टेटमेन्ट) लिएर अध्ययन गरिएको थियो ।
लगानीकर्ताले बताएको प्रतिफल र ब्रोकरबाट लिएको कारोबार विवरणको तुलनाबाट के पाइयो भने कार्य सम्पादनको प्रश्नमा जसले आफ्नो रिटर्न बढी अनुमान गरे वा बढी देखाए ब्रोकरबाट लिएको स्टेटमेन्ट चेक गर्दा तिनीहरुको प्रतिफल सबैभन्दा खराब पाइएको थियो ।
जो आफूलाई औसतभन्दा राम्रो लगानीकर्ता ठान्छन् वा बढी आत्मविश्वासी ठान्छन्, उनीहरुले सेयर बजारमा कमजोर प्रतिफल लिन सकेको अनुसन्धानले देखाएका छन् । यसैले सेयर बजारमा सक्रिय रुपमा कारोबार गर्ने र बढी आत्मविश्वासी देखिनेभन्दा निष्क्रिय भएर कारोबार गर्नेले बढी पैसा कमाउने गरेका छन् ।
संसारमै धेरै सम्पत्ति तिनले बनाएका छन्र, जसले लगानी गरेर कुर्न सकेका छन् । अमेरिकी बजारमा बजार परिसूचक (मार्केट इन्डेक्स)को वृद्धिभन्दा बढी प्रतिशतले नाफा कमाउने लगानी व्यवस्थापक कमै भेटिन्छन् । यसकारण पनि त्यहाँ सेयर बजारबाट राम्रो प्रतिफल लिनका लागि इन्डेक्स फन्डमा लगानी गर्न सुझाव दिइन्छ ।
इन्डेक्स फन्ड एक प्रकारको म्युचुअल फन्ड हो, जसले बजार परिसूचक गणना गर्न छनौट गरिएका कम्पनीमा मात्र लगानी गर्छ । जस्तो कि एस एन्ड पी ५०० अमेरिकाको स्टक एक्सचेन्जमा कारोबार हुने राम्रा र कमजोर ५०० वटा कम्पनी छानेर गणना गरिने नेप्से परिसूचक भने जस्तै बजार परिसूचक हो । यसमा ५०० वटा कम्पनी समावेश छन्। एस एन्ड पी ५०० इन्डेक्स फन्डले यिनै ५०० वटा कम्पनीमा लगानी गर्छ ।
राम्रो प्रतिफल हुँदाहुँदै किन मानिस इन्डेक्स फन्डमा लगानी नगरी बजारमा सेयर बाइ र सेल गर्न दौडिन्छन् ? भन्ने प्रश्नमा विलियम जे बर्नस्टेइन ले द फोर पिलरस अफ इन्भेष्टिङमा लेखेका छन्- मानिस मनोरञ्जन चाहन्छन् । मानिस लगानीमा नाफा मिश्रित मनोरञ्जनको चाहनामा हुन्छन् ।
यही कारण पनि हुनसक्छ, नाफा राम्रो हुँदाहुँदै पनि मानिस नेपाल टेलिकमको सेयरमा त्यति धेरै आकर्षित हुँदैनन् । प्रायः स्थिरझैँ बस्ने टेलिकमको सेयरमा लगानीकर्ताले एउटा मनोरञ्जनात्मक चाल वा मुभमेन्ट पाइरहेका हुँदैनन् । हरेक दिन सेयरको मूल्यमा हुने तल-माथिले मानिसमा उत्पन्न हुने एक प्रकारको उत्तेजना नै मनोरञ्जन हो ।
जस्तो कि कुनै कम्पनीको सेयर अलिक बढी बढ्यो भने त्यसमा अत्यधिक कारोबार हुने गर्छ । यो यहाँ मात्र होइन, संसारको स्टक एक्सचेन्जमा नै त्यस्तो प्रवृत्ति पाइन्छ । त्यस्तो कम्पनी कारोबार संख्या, सेयर संख्या, कारोबार रकम सबैमा अगाडि हुन्छ । यी सबै किन भइरहेको छ भने मानिसले त्यसमा नाफाको अपेक्षासँगै कुनै न कुनै प्रकारको मनोरञ्जनात्मक उत्तेजना महसुस गरिरहेको हुन्छ ।
मनोरञ्जन क्षणिक भए पनि मानिस त्यसमा पैसा खर्च गरिरहेको हुन्छ । जुवामा पैसा जितिँदैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि मानिसहरु किन क्यासिनो जान्छन् वा तास खेल्छन् वा जुवा खेल्छन् भन्दा त्यहाँ तत्काल आउने परिणामसँगै मनोरञ्जन जोडिएको हुन्छ । मानिस नाटक हेर्नभन्दा क्यामरामा कैद गरेर धेरै पटक परिमार्जन गरेर अनेक फूलबुट्टा भरिएको चलचित्र (फिल्म) हेर्न जान्छ भने चलचित्रबाट उसले बढी मनोरञ्जन महसुस गर्छ ।
सेयर बजारमा पनि दीर्घकालीन लगानीमा भन्दा अल्पकालीन कारोबारमा बढी उत्तेजना जोडिएको हुन्छ । दीर्घकालीन लगानी अल्पकालीनको तुलनामा बढी दिक्दार र पट्यार लाग्दो हुन्छ, जुन अवस्था हामी लामो दूरीको बस वा ट्रेन वा हवाइजहाजको यात्रामा पनि महसुस गर्ने गर्छौं र भनिरहेका हुन्छौं- पट्यार लाग्दो यात्रा ।
सेयरको दीर्घकालीन लगानी एकप्रकारले उत्तेजक दर्शकका लागि स्लो मोसनको फुटबल वा बास्केट बल खेल जस्तै हो । यसैले नाफा-घाटा जे भए पनि अल्पकालीन लक्ष्यमा एक प्रकारको मनोरञ्जनको अनुभव प्राप्त हुन्छ। यही भएर पनि मानिस लगानीमा मुभमेन्ट चाहन्छ, जहाँ शारीरिक वा मानसिक रुपमा उसले बेग्लै महसुस गर्न सकोस् । बढ्दो सेयर बजारमा पैसा बनाउने हो भने मनोरञ्जनात्मक कारोबारमा जानुभन्दा पट्यार लाग्दो अवस्थामा होल्ड गरेर बस्नु नै उत्तम हुन्छ ।
पछिल्लाे - मौसममा बदली, विराटनगर एक्कासी अँध्यारियो
अघिल्लाे - गुल्मीमा झाडापखालाबाट एकको मृत्यु, २ सय बिरामी